Horumariyayaashu waxay hadda haystaan ​​beta 5 ee macOS High Sierra 10.13.3 la heli karo | Waxaan ka socdaa mac
Waana inay 7 maalmood ka soo wareegtay markii la soo saaray noocii hore ee beta ee loogu talagalay kuwa soo-saareyaasha ah macOS Sare Sierra 10.13.3 oo Apple ma dabciyo. Noocyada beta waxay ku yimaadaan waqtigooda ballanta iyadoo kiiskan maalinta la doortay ay tahay Talaadada, sidii usbuucii hore.
Marka laga hadlayo nooca laftiisa, ma jiraan faahfaahin badan oo miiska saaran laakiin lama filayo inay ku darto isbeddello waaweyn marka la barbar dhigo noocii hore. Maxaa hubaal ah in macOSkan cusub ee beta 5 uu ku darayo midka caadiga ah Dayactirka cilladaha iyo hagaajinta xasilloonida nidaamka.
Apple maahan wax dhib badan oo waxay rabtaa inay sameyso nooca xiga ee macOS sida ugu macquulsan si aad u hesho bisha Juun oo aad u bilowdo wararka qaarkood OS-ka Mac-da. Waa inaan dhahnaa dhawaanahan si aad ah uma fiicna tan iyo markii Cupertino ay la socdaan noocyada rasmiga ah oo kuwana ay la socdaan qaladaad aan la oggolaan karin, waa sababta ay u saxeen qaababka noocyada horumariyayaashu inay muhiim yihiin.
Ugu dambeyntiina waxaan rajeyneynaa in noocyada rasmiga ah ee rasmiga ah aysan la imaan cayayaanka waaweyn waana mid deggan oo si walba loo cusbooneysiinayo. Xusuusnow in nooca cusub ee soo-saareyaasha ah horeyba looga heli karaa websaydhka Apple ee loogu talagalay kuwa haysta koonto rasmi ah, waqtigan xaadirka ah nooca beta lama heli karo dadka isticmaala ee ku jira barnaamijka noocyada dadweynaha, laakiin waa macquul in dhowrka soo socda saacadaha la sii dayn doono. Apple wuxuu ku sii fiicnaanayaa siyaabo badan oo uga sii darayaa kuwa kale, laakiin ha moogaan fursad aad ku sii deyso betas cusub oo loogu talagalay kuwa horumariya si ay uga shaqeeyaan oo ka caawi inay hagaajiyaan nidaamka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macro High Sierra » MacOS High Sierra 5 beta 10.13.3 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha
Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Koonfurta Kuuriya ayaa furmi doona 27-ka Janaayo